Maxaa kajiro in Shariif Xasan lacag looga dhacay Hotelkii u degana Nairobi Xogmuhiima!! – War La Helaa Talo La Helaa
Maxaa kajiro in Shariif Xasan lacag looga dhacay Hotelkii u degana Nairobi Xogmuhiima!!
By shaaca	 Last updated Sep 13, 2018
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo koox katirsan kaambeynkiisa ayaa waxaa laga dhacay mobileladii ay wateen Kumbuyutaro iyo lacago aan tiradooda la cayimin xalay hotel u deganaa oo ku yaalla Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Boorsooyin lacag ka buuxday oo uu xalay Madaxweyne Shariif Xasan ka soo qaatay Safaarada imaaraadka ee Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, si uu doorashada la filaayo in aay dhawaan dhacdo ugu galo ayaa waxaa ka dhacay sida xaqeejiyeen ilo wareedyo muhiima koox kenyaati ah.
Shariif Xasan oo degana Movenpick Hotel Westlands, behind 9 West mall ayaa markii dhacaas loo geestay kadib wacay Ciidaanka Booliska dalka Kenya, balse waxa –aay u sheegen in aan tagitaankiisa lagu soo war gelin iyaga oo u cudur daartay, sheegayna in aay dabagal ku sameyn doonaan dadkii dhacaas ugeestay.
Shariif Xasan oo dhaqaalahaasi ugu tala galay in uu doorashada u adeegsado una qeybiyo Xildhibaanada Maamulka Koonfur Galbeed, si aay ugu codeeyaan ayaa ku noqonaysa dhabar xooggan maadama lacagta laga dhacay aad u badneyn sida la xaqeejiyay.
Madaxda Dowladda Fedaraalka Soomaaliya, ayaa caqabad u aragta soo laabashada Shariif Xasan iyo in markale loo doorto Madaxweynaha Koonfur galbeed , iyadoo la rumeysan yahay in aay dhaqaalo badan u baxin doonto sidii shaqsi kale ugu soo baxi lahaay doorashada la filaayo.
Xafiiska Nairobi Kenya
Dhageyso:-Oromada Boosaaso oo digniin yaableh soo saaray!